Loza, kitapo ovy mangatsiaka nisy zavatra hafahafa!
Mpanjifa maro no misafidy miantsena any amin'ny fivarotana lehibe noho ny antony azo antoka. Betsaka tokoa amintsika no mieritreritra fa voamarina tsara ny vokatra alohan'ny hahatongavany eo amin'ny talantalana. Saingy, toa tsy misy olona manilika ny zava-misy fa ny vokatra misy singa mampidi-doza dia mety ho tonga eny amin'ny talantalana fivarotana lehibe na eo aza ny fizahana. Araka ny voalazan'izy ireo dia olombelona ny manao diso. Izany indrindra no nitranga tany Lidl. Marina tokoa, a sachet ny ovy an'ny mpanjifa dia nisy sombin-kazo iray.
Zavatra tsy mahazatra amin'ny vokatra
Raha ny marina, dia lehilahy 50 taona nonina tao Pas-de-Calais no niharan'io tsy fitandremana io tany Lidl. Raha ny marina, ity lehilahy ity dia mpanjifa tsy mivadika amin'ny marika alemana nandritra ny taona maro. Ary toy ny ankamaroan'ny mpanjifa fihenam-bidy, ity no misafidy ny supermarket. Voalohany ho an'ny vidin'ny vokatra ambany, fa ny fiarovana ny sakafo hohanina ihany koa. indrisy, nianjera avy teny ambony izy rehefa nahita sombin-kazo tao anaty kitapo ovy mangatsiaka.
Lidl, mpanjifa miaiky ny tsy fahombiazany
Gaga be tamin'ilay sombin-kazo tao anaty kitapony ovy raha teo am-pahandroana izy dia niantso avy hatrany ny serivisy ho an'ny mpanjifa Lidl. Araka izany, ampahafantariny azy ireo ny tsy fahasarotany amin'ny vokatra vokariny. Manoloana ny toe-javatra dia nanolo-tena ny supermarket fa hanome vola azy noho ny totalin'ny kitapony. Ny vola izay nitentina 1,19 euro. Mazava ho azy, na dia ny entana tsy azo resena ny fivarotana enta-mavesatra ao amin'ny supermarket.
Araka ny tenin'ity lehilahy ity tao amin'ny mikrônon'ilay gazety La Voix du Nord, ireo vokatra ireo dia an'ny an'ny marika Harvest Basket. Raha ny vokatr'ity farany dia hita amin'ny talantalana Lidl rehetra. Angamba, sambany io lehilahy io no nahita olana tamin'ny vokatra Lidl. Na eo aza izany dia mampitandrina ny mpamaky ny gazety izy hitandrina mba tsy hitandrina ny vokatra ara-tsakafo eny amin'ny fivarotana lehibe.
Lidl manome toky ny mpanjifany
Aorian'ny fisehoan-javatra toy izany dia manontany tena ny mpanjifa Lidl momba ny fahamendrehan'ny vokatra vokariny. Saingy mba tsy hanimba ny lazan'izy ireo ity karazana olana ity, aleon'ilay fihenam-bidy henjana ny mandray an-tanana ny raharaha. Voalohany mba tsy hiverenan'io toe-javatra io ihany fa hamaly ny olan'ny mpanjifa. Ho an'izany, ny fitantanana ny rojo dia manome toky ny mpanjifany fa ny fanaraha-maso an'io karazan-javatra io dia zava-dehibe amin'ny fivarotana lehibe.
Araka izany, taorian'ny fitarainana napetrak'ilay lehilahy dimam-polo taona tamin'ny 22 Jolay, dia nanao fanadihadiana anatiny i Lidl hiatrehana ny olana. Avy eo, ny mpamatsy ny marika volontsôkôlà tenifototra dia hadinina. Eny tokoa, ny mpanjifa dia hanana valiny ao anatin'ny fotoana fohy momba ny tsy fahombiazany.
Saingy ho an'ireo mpanjifa izay manana olana amin'ny vokatra novidiny avy tany Lidl, forum iray misy mpanjifa 60 tapitrisa dia afaka manampy anao hahita izay hatao manaraka.
Mitohy ny fanentanana amin'ny marika
Na eo aza izany fahasahiranana izany dia manohy manolotra vokatra kalitao ho an'ny mpanjifany i Lidl, saingy amin'ny vidiny ambany. Mba hanaovana izany, ny marika dia manome katalaogin'ny vokatra fampiroboroboana isaky ny alarobia. Afaka mahita vokatra avy amin'ny hatsarana, fitaovana ao an-dakozia na zavatra haingon-trano toy ny jiro ultra-design vaovao izay hanazava ny efitranonao.
MITANDREMA RAHApaomavaovao mangatsiaka
Angelina Jolie dia miantso ny 'maha-olombelona bebe kokoa' raha mitsidika ireo mpifindra monina Venezoeliana any amin'ny sisintany Kolombia - Lahatsary
Fanadihadiana: Ahoana ary nahoana no lasa ilay mpanakanto Dj Arafat. - Lahatsary